BASA RINO 2018 - Runogona kufamba neTransfer Service Basel -
Zvose zvinyorwa zveBasel zvinopindira kune dzimwe makambani anonzi 1800 anounza varindi vavo uye zvishongo zvezvishongo paBaselword. Hapana chikonzero chekunyunyutira pamusoro pehuwandu hwevashanyi kune izvi zvakakosha mune zvekutengeserana, nokuti segore negore, 2017 inotarisirwa kumira nevanotengesa 100.000 uye vamiriri vehupfumi paWorld Watch uye Jewellery Show. Panguva yeC22 March 2018 masuo ewakanaka achazarurirwa kubuda kwevashanyi.
Dhinda zvakanaka paBASELWORD - Transfer Service Basel
Yedu EuroAirport Basel inongova nemaminetsi mashomanana nemotokari kubva panzvimbo yekuratidzira. Asi iwe zvechokwadi unoda-kufanana nevamwe vakawanda vanofamba nebhizimisi -kushanyira kuratidzwa kwezvigadzirwa kwemazuva akawanda. Kazhinji vatinha vedu vanotiudza kuti kukurukurirana nekukurukurirana nevatadzi, maitiro matsva akawanda nemakwara kuburikidza nemakamuri ekuratidzira ndiwo mazuva anoshungurudza zvikuru mugore rebhizimisi rebhizimusi. Ndicho chikonzero nei tine hupi hupi hupi hwemotokari yekushambadzira panguva yeBaselworld.
Uine purogiramu inonakidza iwe uchasvika zvakanaka uye wakachengeteka kubva kuhotera yako kana kuti zvakananga kubva kuBasel yekuendesa kune imwe nzvimbo yako. Vanofamba mumutauro First Class Limousine Kuronga kweGermany uye haufaniri kunetseka pamusoro pemotokari yakaremara kana kupisa kwakaderera panzvimbo yekuratidzira. Mukuwedzera pakubata nguva nekuremekedzwa kwevatakuri vedu, isu takakurumbira pakati pevanhu vebhizimisi nokuti tinoteerera kungwara kukuru munguva yerwendo.
Transfer Service Basel iri nyore kushandura paIndaneti
Tinoziva-nguva ndiyo mari. Ndokusaka tine imwe yako Online Réservation turusi yakarongedzwa. Neawa imwe chete nguva yekufambisa, takagadzirira iwe semugoveri wepachivande uye mutyairi pamberi pebhokisi rako rehotera kana padivi rekudenga munzvimbo yekuuya uye yekuenda.
Dare reTransfer Service Basel rinokumbira iwe unofadza kugara paBaselworld uye nguva dzose yebhizimisi yakanaka
Akaiswa mu: Airport shuttle Baselworld Kushandiswa kwechikepe Trade fair transfer Transfer service
taxi.flughafen March 16, 2017 November 18, 2017 muBasel, nhandare yendege Shuttle, Limousine basa Hapana mhinduro
← 360 ° Kutumira basa kune hoteli vaenzi muBasel
BASA RINO 2018 - Kufamba uchitenderera neTransfer Service Basel →